Poolisiin Jaakoob Bleekitti dhukaasuu balaleffachuudhan hiriirota Kinooshaa Wiskaansan keessatti tibbana geggeefaman keessaa tokko
Prezidaant Doonaald Tramp Kinooshaa Wiskaansen bakka torban darbe poolisiin lammii Ameerikaa gurraacha Jaakoob Bleek qabuuf yaaluu dhaan dudda isaa keessa yeroo torba rukutee kana irraan mormiin hookkaraan guutame itti ka’e har’a daawwatuuf jiru.
Tramp kaleessa tuuta oduuf ibsa kennanii Maatiin Blake sababaa abukaatoon isaanii akka hirmaatu fedhaniif wal arguuf karoora akka hin qabaatin beeksisan.
Blaakitti dhukaafamee guyyaa lama booda ennaa mormii Kinooshaa dargaggeessi miseensa garee of ijaaruun ganda ofiif eegumsa goona jedhanii ta’e Kyle Rittenhouse, namoota lamatti dhukaasuun ajjeesee sadaffaa madeesse Tramp qeequuf tole hin jedhin hafan.
Kan ofii isaa daldalaawwan eeguu irrattan bobba’e ofiin jedhu beekaa nama ajjeesuu dabalatee yakkaawwan shaniin himatame.
Haleellaa irratti oofan jechuun waa’ee Rittenhouse Tramp tuuta oduuf ennaa ibsan dubbatan. Du’uu danda’a ture, Mormitoota irratti dhukaasa hin banne jedhan.
Bulchaan Wiskaansen Toonii Evers prezidaant Traamp har’a Kinooshaa akka hin daawwanne gaafachuu dhaan, daawwannaan Tramp adeemsa nuti madaa ofiitti fayyuuf qabanne nu duraa danqa jedhan. Daawwannaan keessan hojii nuti adda addummaa jiru irra aannee waliin taanee fuula duratti tarkaanfannu boodatti nu duraa harkisa jechuun illee yaaddoo qaban ibsan Tooniin.
Daawwannaan Tramp kun kan dhaga’ame isaanii fi itti aanaa prezidaantiin duraanii Joo Baayiden kan filannoo prezidaantummaa Sadaasa keessatti mormituu isaanii ta’an waa’ee nageenyi dhabamuu fi jireenyi Ameerikaa keessaa ennaa bulchiinsa isa tokkoo amansiisaa akka hin ta’in walii walii isaanii himatan.
Korri Paartiilee Amerikaa Lameen Gaggeessan Attam Ture?
Filannoo Naannoo Tigraay Keessatti Geggeessamuuf Galmeessuun Filattootaa Kaleessa Xumurame
‘Manni Barnootaa Diida Qilleensaa Ijaarame; Boorana Keessa garuu Manneen Barnootaa akkasii 75 Oltu Jiru’